कथा : गुरू र बिद्यार्थी, आखिरीमा कुन गुरू ? - निष्कर्ष न्यूज
कथा : गुरू र बिद्यार्थी, आखिरीमा कुन गुरू ?
दिपेन्द्र अधिकारी २०७७ कार्तिक १, शनिबार १७:४१
एक दिनको कुरो थियो ..
राम, श्याम, धने र म संगै स्कुल जान घरबाट निस्कियौ । गफ गर्दै साथीभाइ हरूसंग , टिनएजर भएर होला उरन्ठेउला पनि थियौ ।
ऋघि अघि ज्ञान प्रसाद सर चुरोट पिउदै हड्नु भएको थियो । उहाँले हामीलाई नैतिक शिक्षा पढाउनु हुन्छ ।
हामी उहाँको पछी पछी थियौ । हामी पछी पछी भएको सरले थाहा पाउनु भएन । स्कुल पुग्यौ एकछिन पछी पाले दाईले घन्टी मार्नु भो पिटी खेलि, रास्ट्र गान गाएर कक्षाकोठामा गयौ ।
आजको तेस्रो क्लास ज्ञान प्रसाद सरको थियो ।
बिषय थियो कसरी स्वस्थ्य समाज वनाउने र आफु पनि नैतिकबान संगै स्वस्Þ्थ्य रहने । अबस्य धुम्रपान सम्बन्धी कुरा त आउने नै भयो । ज्ञान प्रसाद सर भन्दै जानु हुन्छ । चुटोट पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ, एक खिलिले चुरोटले एक सेकेन्ड आयू घट्छ । पुस्तकमा जे जे लेखिएको त्यो सुनाउदै जानु भयो । हामी सुन्दै गयौ ।
पछी बातावरणको कुरा आयो । सर भन्नु हुन्छ हामीले फोहोर जाहाँ पायो त्यहीं फाल्नु हुन्न भन्दै गर्दा , धने साथीको हाँसो रोकिएन, खितिति गरेर हाँस्न थाल्यो, हामी पनि हास्यौ, र सबै कक्षाका साथीहरूपनि हास्न थाले ।
ज्ञान वहादुर सर त छक्क पर्नुभो । किन तेस्तो हास्नु पर्ने ? बिषय बस्तुत केहि पनि पढाएको थिईन । नहास बदमासहरूहो ! शान्त शान्त भन्दै सम्झाउनु भयो र पछि सबै शान्त भयौ । र क्रमस अरू कलास लिएर स्कुल सकिएपछी हामी मिल्ने चार साथी हरू संगै फर्कने क्रममा ज्ञान प्रसाद सरले आजसाँझ तिमीहरूको घरमा आउँछु अभिभाबक संग मिल्न र तिमिहरूले अनुशासन नजानेका कुरा साथै सामान्य ज्ञान पनि नसिकेको कारण सोध्न । भन्दै सर हिड्नु भयो । हामी पनि डराई डराई घर फर्किउ । घरमा पनि खबर पुगिसकेको रहेछ ।
हामी सबैको घर नजिकै छ । त्यस दिन सबै धने भन्ने साथीकोमा जम्मा भयौ । साँझ दुईजना सरहरू आउनु भयो ।
सरले सबैलाई अभिबादन गर्दै छलफल सुरू गर्नु भयो । बाबु नानीहरूलाई घरबाट पनि सामान्य ज्ञान सिकाउनु होला । नसिकाएकै कारणले आज यि बिद्धार्थी भाईहरूको आचरण नराम्रो भएको छ भन्नु भयो । सुनेपछी तेही हाम्रा बाबाहरूले मज्जाले पिट्दै गाली गर्नु भएको । किन सरले पढाउदा फेरी हासेको भन्दै ?
पिटाईको पिडा सहन नसकिने भैसक्यो र चुप लाग्न नसकेर मैले बाबालाई भन्न थाले । हो बाबा आज पहिला धने हास्यो र हामि पनि हास्यौ । तर तपाइँहरूले हामीलाई किन हाँस्यौ भनेर प्रेम भाब संग सोधेको भए हामी कारण भन्थेउ । कारण नसोधि सरले भनेको भरमै पिट्नु भो ।
लौ बज्जीया हो भन किन हाँस्यौ त ?
साथी रामले सबैलाई सम्झायो । यसरी बाटोमा यस्तो देखियो । बिहान सरको गराई र पछि हामीलाई सिकाईको बिच मेल खाएन । उल्टो थियो र हास्यौं । सरी अब आईन्दा सर, गुरूहरू प्रति कहिलेपनि हास्दैनम भनेपछी । बाबाहरूले हामीलाई अंगालो मार्दै सरी बाबुहरू भन्नु भयो र सरहरूलाई जानुस तपाईहरू आज भन्नु भयो ।
ज्ञान प्रसाद सर आफै लज्जित हुनुभयो । मुखै रातोपीरो गर्दै सर भन्नु हुन्छ , बाबुहरूलाई सिएकाएको भनेकोत त आज तिमीहरूले नै मेरा आँखा खोलिदियौं । बास्तबमा हो मैले किताब पढेर जे लेखेको छ त्यही सिकाएँ तर व्यवहारिक जिवनमा पनि लागु गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पटक्कै महसुस गरेको थिईँन ।
आज मेरा विद्यार्थी नै आज मेरा गूरू भयौ ।
अब देखि म जे पढाउँछ त्यही आफ्नै जिवनमा पनि लागु गर्छु भन्दै । सबैलाई अभिवादन गर्दै सरहरू आ आफ्नो घर फर्कीनु भयो ।
पोखरा, हाल जापान
बिद्यार्थीलाई सचेतना – विद्यालयमा आगलागी, सेनाले गर्यो उद्धार, बिद्यार्थीले सिके
दमक/ झापाको कमल गाउँपालिका २ को कमला मदन आश्रित माविमा शुक्रबार दिउँसो भएको एउटा कृत्रिम घटना । बिद्यालयमा अचानक आगलागी भयो । त्यहाँ घटनासंगै कोलाहल
दमक चोकमा स्रष्टाहरु – प्रतिगमन विरुद्ध रचना वाचन
दमक/प्रदेश १ स्रष्टाहरुले मुलुकमा भएका सबै खाले प्रतिगमनका विरुद्ध आज शुक्रबार दमकको गणतन्त्र चोकमा रचना वाचन गरेका छन । मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङको प्रमुख
अक्षर यात्राःअतितको यात्रा र साक्षीको बकपत्र
दीपक सुबेदी जब विचारहरू विकेन्द्रित ह’न्छन्, तब मनहरू छरिन्छन् . छरिनका लागि अब क’नै ठाउँ रहँदैन सायद तब भावना र कल्पनाहरू अक्षरसँग यात्रा गर्दा रहेछन्
बाँस्कोटाको पहिलो कृति चित्रगुप्तको ल्यापटप
दमक/लामो समयदेखि प्राध्यापन पेशामा संलग्न विश्लेषक तथा लेखक धनञ्जय बाँस्कोटाको पहिलो कृति चित्रगुप्तको ल्यापटप नामक कथा संग्रह शनिबार विमोचन हुँदैछ । बाँस्कोटा १६ बर्षदेखि दमक
धिमालहरु पहिलो पटक चिचिरी ( गेन्द्रो) दिवस मनाउँदै ( सूचनासहित)
दमक/ पूर्वमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख धिमाल जातिको मौलिक खानेकुराहरु संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न दमकमा चिचिरी गेन्द्रो दिवस मनाएने भएको छ । यही माघ
शिवसताक्षीमा डिपीएल युथ टिम गठन
दमक/झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका स्थित दुधेमा डिपीएल युथ टिम गठन भएको छ । १९ सदस्यीय डि पी एल युथ टिमको मंगलबा शाखा विस्तार गरिएको हो ।
माघे संक्रान्तिदेखि फिल्म हल खुल्दै, एउटा यस्तो प्रेम कहानी हेर्न पाइने
दमक/ कोरोना संक्रमणका कारण धरासायी बनेको नेपाल चलचित्र संघ उक्सिने छाँटकाँट त छैन तर फिल्म हलहरु भने माघे संक्रान्तिदेखि हल सञ्चालनको तयारीमा छन । १
कांग्रेस दमकको वनभोजमा जुनु प्रसाइँले दमक तताउने, राजनीतिसंगै सांगितिक कार्यक्रम हुँदै
दमक/ नेपाली कांग्रेस दमक नगर समितिले बर्षेनी गर्दै आएको वनभोज कार्यक्रमलाई यस बर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । यो बर्ष पनि २७ पुषमा वनभोजसंगै समसामयिक
पूर्वेली गायक कुशलले ल्याए “हाक्पारे ख्याली”
दमक/पूर्वेली गायक कुशल थलङको नयाँ गीत “हाक्पारे ख्याली” सार्वजनिक भएको छ । लिम्बू संस्कृतिमा आधारित रहेको लिम्बू गीतको भिडियो गायक कुशलको आफ्नै यूटुव च्यानलबाट सार्वजनिक
चलचित्र व्यवसायी भन्छन–जुलुस र आमसभा खुला गरेर फिल्म हल चाहिं बन्द गर्ने ? अब आन्दोलन गर्छौ
दमक/ गत वर्षको चैत दोस्रो सातादेखि बन्द रहेका सिनेमा हल अहिले सरसफाइको क्रममा छन् । अधिकांश क्षेत्र खुला भए पनि सिनेमा हलबारे सरकार मौन छ